Aix Arome Cafe I-Cafe - Umagazini Design
I-Cafe Ikhefi yilapho izivakashi zizizwa zihlangana khona kanye nolwandle. Isakhiwo esikhulu seqanda esikhulu esibekwe phakathi nendawo sisebenza ngasikhathi sinye njenge-cashier kanye ne-coffee supply. Ukubonakala kwe-iconic kwedokodo liphefumulelwe ubhontshisi wekhofi omnyama futhi obuthuntu. Ukuvuleka okuningana okukhulu okungaphezulu phambi kwezinhlangothi zombili ze “bhontshisi omkhulu” kusebenza njengomthombo omuhle wokuphefumula nokukhanya kwemvelo. Ikhefi linikeze itafula elide njengesixha sama-octopus kanye nama-bubu ngokuphelele. Ama-chandeliers abonakala ngokungahleliwe afana nokubuka kwezinhlanzi emanzini angaphezulu, izindwani ezicwebezelayo zidonsa ukukhanya kwelanga okugqamile kusuka esibhakabhakeni esimhlophe.
Igama lephrojekthi : Aix Arome Cafe, Igama labaklami : One Plus Partnership Limited, Igama leklayenti : Aix Arome Coffee Co. Ltd..
I-Cafe One Plus Partnership Limited Aix Arome Cafe